Teknolojia azo ampiasaina azo antoka indrindra | Martech Zone
Teknolojia azo ekena indrindra takiana
Herinandro vitsivitsy lasa izay, ny reniko dia nampitahotra ny fony ka nitaky ny hanaovana azy defibrillator fotoana feno. Ny rafitra dia nanara-maso sy nampakatra ny angon-drakitra am-pony tamin'ny alàlan'ny sensor tao anaty palitao, hampitandrina avy hatrany raha misy ny toeran'ny sensor, ary - raha sendra misy aretim-po - dia mampitandrina ireo olona mijery fa mihemotra ary manimba ny marary izany. Zavatra mampatahotra tsara - fa mahafinaritra ihany koa. Nahatonga azy ho tonga amin'ny fitsidihana manan-danja izany ary hanana fiadanan-tsaina fa arahi-maso izy. Izany no haitao azo ampiasaina izay tena manova an'izao tontolo izao! (BTW: Tsy mila mampiasa azy intsony ny reniko. Rehefa niverina izy dia nanao cathedorization ary tsy nisy olana hita. Misaotra soa!)
Wearable, tranonkala iray miresaka momba ny haitao azo anaovana lamaody, dia nanontany amin'ny teknisianina hoe karazana teknolojia azo ampiasaina ve no tadiavin'izy ireo - ary novokarin'izy ireo ny sary eto ambany miaraka amin'ireo valiny. Tsy zavatra mamonjy aina toa ny Lifevest io, fa ny teknolojia afaka manatsara ny fomba fiainantsika rehetra.
Mahatsikaiky fa manana aho Google Glass ary ny Pebble Watch… Ny # 1 sy # 2 ao amin'ny lisitra. Izao fotsiny ny roa cents-ko, saingy nijanona tsy nitafy roa aho… tsy nanatsara ny fahaizako izany na nanova ny fiainako tamin'ny fomba sasany. Ny fiambenana Pebble dia nisy fiasa mahafinaritra… toy ny fampisehoana amiko hoe iza no niantso tamin'ny findaiko raha nivory aho ary nivadika ny findaiko… fa nivadika fanelingelenana io fa tsy fanampiana fotsiny. Tsy nanao na inona na inona ho ahy ny Google Glass - mieritreritra aho fa ny Glasshole dia anarana mahatsikaiky nefa somary mety amin'ny ankamaroan'ny olona hitako mitafy azy ireo. Mampahatsiahy ahy ny hafanam-pon'ny Bluetooth izay, nandritra ny fotoana kelikely, andiana adala maromaro no miara-mandeha amin'izy ireo ao an-tsofiny ary toa miresaka amin'ny tenany amin'ny toerana tsy dia lavitra indrindra.
Manantena ny zavatra mety hataon'i Apple hanovana ity indostria ity aho. Raha azoko atao ny miditra amin'ny ankamaroan'ny rindranoko avy amin'ny fampisehoana retina eo an-tànako izay mahafinaritra ny famakiana (fa tsy ny fampisehoana Pebble izay toa efijery Nintendo 20 taona), dia mety te-hitafy ilay fitaovana tokoa aho raha toa ka tsara sy miasa tsara. Heveriko fa mbola lavitra ny lalan-kalehantsika! Inona ny hevitrao?
Tags: google glassvatokely famantaranandro maranitrafanaraha-maso hentitramanan-tsaina fiambenanawearable teknolojia
Me-Commerce sy ny ho avin'ny mpivarotra